चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्छ, तर ऋणमा रेल बनाउनुहुँदैन् : डा. महत – Rajdhani Daily
चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्छ, तर ऋणमा रेल बनाउनुहुँदैन् : डा. महत
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलवेसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ : प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. भट्टराई
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले चीन नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र मात्रै नभएर एउटा नजिकको मित्र भएको सुनाए । उनले भने,‘चीनको समृद्धि अहिले दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वमै चीन शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । हामीले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’ आफ्नो पार्टीले विपी कोइरालाको पालादेखि नै चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेको पनि महतले स्पष्ट पारे ।